Fanariana fasika aluminium, fantsom-pako vita amin'ny alim-pasika - Fitaovam-pandrefesana fantsom-pandrefesana ao Sina - Fitaovana Minghe
Fanariana fasika aluminium - fanamboarana manokana miaraka amin'ny alim-baravarana alimina
Aluminium dia vy fotsy volafotsy mora volavolaina, malefaka sy maivana, mety amin'ny fanariana fasika. Fa ho an'ny fanariana fasika aluminium dia manana fanamby tsy manam-paharoa izy io.
Ny fanariana fasika dia fomba fanariana izay manolo ny lasitra savoka amin'ny lasitra fasika. Matetika, ny lasitra dia misy halves roa izay, rehefa ampiarahina, dia hita taratra ny lafy ratsin'ny endrika halatsaka. Mba hanaovana ny bobongolo, ny mpamokatra dia manomboka amin'ny fametrahana die eo anelanelan'ny vatan'ny bobongolo antsoina hoe flasks (ilay ambony antsoina hoe ny makarakara ary ny any ambany antsoina hoe drag). Rehefa vita ny toerana dia hafafin'izy ireo amin'ny vovoka, avy eo alevina ao ambanin'ny tanimanga mifangaro sy tanimanga voasivana tsara. Ity fangaro ity dia manampy amin'ny fitahirizana ny laoniny refy malefaka. Aorian'izany, ny mpanamboatra dia manitrika ny fizotrany sy ny tarihiny eo ambanin'ny sisa amin'ny fangaro tanimanga-fasika. Manaraka izany izy ireo amin'ny alàlan'ny fametahana mafy ny fasika, ankoatry ny fisokafana iray farafaharatsiny ao anaty makarakara, tohanan'ny fantsona iray. Rehefa vonona izy ireo, miditra amin'ny lasitra ny mpamokatra amin'ny fanesorana ny makarakara sy ny sisa amin'ny maty. Miaraka amin'ny bobongolo, mandroso amin'ny sisa amin'ny fizotran'ny casting izy ireo.
Minghe Casting dia mpamokatra fantsom-pandrosoana fasika avy any Shina, ny fitaovana fanariana fasika eto amintsika, ny lathes CNC, ny fikosoham-bary, ny milina ary ny milina fitrandrahana dia mifamatotra amin'ny fanaparitahana, fantsom-pamokarana, famolavolana, fanetezana, fandavahana, fanodinana, fikolokoloana, kofehy, sandblasting, polishing, famaranana vibratory, fanandramana tsindry, fanasana sy kojakoja fanaovana fivoriambe, mba hanomezana fanamboarana mahomby sy feno ho an'ny faritra fanariana fasika fanao aluminium anao. Afaka mamokatra faritra saro-takarina amin'ny géometryia be pitsiny sy lavaka lalina isika amin'ny alàlan'ny fanariana fasika aluminium sy fanariana hafa.
Ny fampiharana ny fanariana fasika aluminium
Ny famafazana fasika, ny fizotran'ny fanary be mpampiasa indrindra, dia mampiasa bobongolo fasika lafo vidy hamorona faritra vy sarotra azo amboarina amin'ny firaka rehetra. Satria ny bobongolo fasika dia tsy maintsy potehina mba hanesorana ilay ampahany, antsoina hoe fanariana, fanariana fasika matetika dia ambany ny tahan'ny famokarana. Ny fizotran'ny fasika dia misy ny fampiasana lafaoro, metaly, lamina ary bobongolo fasika. Ny metaly dia atsonika ao anaty lafaoro ary avy eo dia arotsaka ary araraka ao anaty lohan'ilay lasitra fasika, izay novolavolain'ny endrika. Ny lasitra fasika dia misaraka manaraka ny tsipika fizarazarana ary azo esorina ny fanamafisana mihamafy.
Ny fanariana fasika dia ampiasaina hamokarana singa metaly maro karazana miaraka amin'ny geometry sarotra. Ireo faritra ireo dia afaka miovaova be amin'ny habe sy ny lanjany, manomboka amin'ny ony roa ka hatramin'ny taonina maro. Ny ampahany kely amin'ny fasika dia misy singa toy ny paosy, pulley, crankshafts, tsorakazo mampifandray ary propeller. Ny fampiharana lehibe kokoa dia misy trano ho an'ny fitaovana lehibe sy tobin-tsolika mavesatra. Ny fanariana fasika dia fahita ihany koa amin'ny famokarana singa fiara, toy ny «bloc de moteur», «manifold» ny maotera, lohan'ny varingarina ary ny trangana fandefasana.
Fomba fizotran'ireo serivisy fanariana fasika alimina alimina anay:
Cast Aluminium Foundry
Lamina ambony sy lamina ambany
Sand bobongolo - Esory ny lamina
Fenoy ny aloky ny bobongolo amin'ny alimina alimina
Esory ny bobongolo fasika ary alao ny fanariana aluminium
Aluminium Cast Sand vita
Famaritana ny vokatra momba ny serivisy fanariana fasika aluminium
Fomba hafa vita amin'ny aliminioma:
Tombony azo avy amin'ny serivisy fanariana fasika any Minghe Aluminium
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fanariana fasika aluminium
Safidio ny serivisy fanariana fasika aluminium tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny famafazana fasika aluminium anay dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom fanariana sinoa ny serivisy dia manome filaharana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny fepetra arosonao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikasa fanariana fasika aluminium anao.